Wayo kiln Factory | China Wayo n'ekwú Manufacturers, Suppliers
Ọnwụ Juda- 300 tọn / ụbọchị X4 Lime kilns na Luoyang, Henan Province-EPC project
Stone echebe ebu
A na-ebu eriri belt, dị ka akụrụngwa maka njem na-adigide, nke a na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ọ bụ otu n'ime akụrụngwa na-ebugharị ya. Uru nke iji mkpuchi ala n'okpuru ala akụrụngwa igwe bụ na ọ na-ebelata mmetọ nke ájá na mkpọtụ, na-agbaso
Ahụ hopper bụ akụkụ anọ dị iche iche, a na-enye efere na-enweghị mgbatị na mgbidi dị n'ime, ọdụ ụgbọ mmiri na-adịghị ọcha na-etolite n'etiti efere abụọ ahụ na-adabaghị adaba, na njedebe dị ala nke akwa na-esote nke efere ahụ na-enye ihe ngosi.
Thedị nkesa ekike na-ekesa teknụzụ na-agbasa ma na-agbatị iji gbanwee ọsọ ntụgharị nke ngwaọrụ nkesa na oke nke ihe ahụ na-agbagha dị ka dayameta dị n'ime kiln ahụ.
Kiln isi Ọdịdị: oku ahu shei maka metal shei, wuru refractory brik. Kiln refractory ihe onwunwe bụ: a oyi akwa nke refractory Adobe Red Adobe A oyi akwa nke aluminom silicate eriri chere slag
Calcium hydroxide akụrụngwa, Calcium hydroxide Production Line akụrụngwa, Calcium Hydroxide Ime, Ime Calcium hydroxide, Aha Azụmaahịa nke Calcium Oxide, Calcium oxide na Calcium hydroxide,